ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက် ဘာတွေမလုပ်သင့်ဘူးလဲ? – Trend.com.mm
Posted on March 15, 2019 by Noel
အသည်းကွဲတာကိုကုစားရတဲ့အလုပ်ဟာ ဘယ်တုန်းကမှမလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး။ဟုတ်တယ်ဟုတ်! ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့
လမ်းခွဲပြီးတဲ့အချိန်ဟာ ကိုယ့်ဘ၀ထဲက တစ်ခုခုလစ်ဟာသွားသလို ခံစားကြရမှာပါပဲ။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီလိုအချိန်ဟာ အမှားအယွင်း
အလုပ်မိဆုံးအချိန်ပါပဲ။ပြီးမှ နောင်တမရစေဖို့ ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲပြီးတဲ့အခါ ဘာတွေမလုပ်သင့်ဘူးလဲဆိုတဲ့အကြောင်း ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။
ကိုယ်နဲ့ပြတ်စဲထားတဲ့ချစ်သူဟောင်းကို ဖုန်းခဏခဏဆက်တာ၊မက်ဆေ့ခ်ျပို့တာမျိုးဟာ မကောင်းတော့ပါဘူး။ကိုယ့်ဘက်ကသံယောဇဉ်မပြတ်နိုင်လို့
ဆိုပေမဲ့ တစ်ဖက်လူအတွက်တော့ ဒါက အနှောင့်အယှက်တစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီ။သူ့ဘက်က စာပြန်မပို့တဲ့အခါ ကိုယ်ပဲဝမ်းနည်းရတာမဟုတ်လား။
အရွဲ့တိုက်တဲ့အနေနဲ့ သူနောက်တစ်ယောက်ရရင် ငါလည်းနောက်တစ်ယောက်ထားပြမယ်ဆိုတာမျိုးက ကိုယ့်အတွက်ရော နောက်ချစ်သူကောင်လေး
အတွက်ပါမကောင်းပါဘူး။အထူးသဖြင့်ကိုယ်က ရွဲ့ချင်ဇောနဲ့ထားလိုက်ပေမဲ့ အဲ့ဒီသူက ကိုယ့်ကိုတကယ်ချစ်နေတဲ့အခါ သူ့ကိုစိတ်ဒဏ်ရာပေးသလို
ဖြစ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့် အရင်ဆုံး ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်တည်ငြိမ်အောင်ထားသင့်ပါတယ်။
အရက်သောက်ရင်မေ့တယ်ဆိုတာ ခဏတာပါပဲ။ပြီးရင် ပြန်သတိရနေဦးမှာပါ။ဒါကြောင့် အရက်သောက်ရင်မေ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့
နေ့စဉ်လိုလိုသောက်ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် အရက်စွဲတာသာ သင့်မှာအဖတ်တင်သွားပါလိမ့်မယ်။တစ်ခါတစ်ရံထက်ပိုတဲ့ အရက်သောက်ခြင်းတွေက
လူတော်တော်များများက စိတ်ညစ်ရင်အစားနဲ့ဖြေဖျောက်လေ့ရှိပါတယ်။ဒါက ကောင်းပါတယ်။အစားစားလိုက်တော့ စိတ်သက်သာရာရသွားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့
အမြဲလိုလို အစားနဲ့ပါးစပ်နဲ့မပြတ်ပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့လှပနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုဖျက်ဆီးမိသလိုဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးကိုလည်းထိခိုက်လာ
ဘာလုပ်မှာလဲ ပြတ်စဲပြီးသားလူတစ်ယောက်အကြောင်းကို အမြဲစုံစမ်းနေတာဟာ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် စိတ်ညစ်အောင်လုပ်နေတာနဲ့အတူတူပါပဲ။
သူ့အကြောင်းတွေစုံစမ်းမယ်။သူနဲ့တွဲနေတဲ့ကောင်မလေးအကြောင်းစုံစမ်းမယ် ပြီးရင် ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်အပြစ်တင်မယ်။၀မ်းနည်းမယ်။ငိုမယ်။
စိတ်ညစ်စရာတွေပြန်တွေးနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်စိတ်ကလေး ညစ်နွမ်းပါတယ်နော်။ဒါက စိတ်ဖိစီးမှုတွေပါဝင်လာစေမှာပါ။ဒါကြောင့်သူ့အကြောင်း
ချစ်သူနဲ့လမ်းခွဲပြီးတဲ့အချိန်ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကတော့ ကြေကွဲဝမ်းနည်းနေရဦးမှာပါပဲ။ဒါတွေကို ကိုယ့်အတွက်
ကောင်းမွန်စေတဲ့အရာတွေနဲ့အစားထိုးပြီးဖြတ်သန်းဖို့လိုပါတယ်။အပေါ်က အချက်တွေအတိုင်းတော့ မလုပ်မိစေနဲ့နော်
အသညျးကှဲတာကိုကုစားရတဲ့အလုပျဟာ ဘယျတုနျးကမှမလှယျကူခဲ့ပါဘူး။ဟုတျတယျဟုတျ! ကိုယျခဈြရတဲ့သူနဲ့လမျးခှဲပွီးတဲ့အခြိနျဟာ ကိုယျ့ဘဝထဲက တဈခုခုလဈဟာသှားသလို ခံစားကွရမှာပါပဲ။ပွောရမယျဆိုရငျတော့ အဲ့ဒီလိုအခြိနျဟာ အမှားအယှငျးအလုပျမိဆုံးအခြိနျပါပဲ။ပွီးမှ နောငျတမရစဖေို့ ခဈြသူနဲ့လမျးခှဲပွီးတဲ့အခါ ဘာတှမေလုပျသငျ့ဘူးလဲဆိုတဲ့အကွောငျး ဝမြှေပေးလိုကျပါတယျ။
*ဖုနျးခဏခဏဆကျတာ၊မကျဆခြေျ့ပို့တာမြိုးကိုယျနဲ့ပွတျစဲထားတဲ့ခဈြသူဟောငျးကို ဖုနျးခဏခဏဆကျတာ၊မကျဆခြေျ့ပို့တာမြိုးဟာ မကောငျးတော့ပါဘူး။ကိုယျ့ဘကျကသံယောဇဉျမပွတျနိုငျလို့ဆိုပမေဲ့ တဈဖကျလူအတှကျတော့ ဒါက အနှောငျ့အယှကျတဈခုဖွဈသှားပါပွီ။သူ့ဘကျက စာပွနျမပို့တဲ့အခါ ကိုယျပဲဝမျးနညျးရတာမဟုတျလား။
*သူနောကျတဈယောကျရသှားလုိ့ ကိုယျလညျးနောကျတဈယောကျကောကျထားလိုကျတာမြိုးအရှဲ့တိုကျတဲ့အနနေဲ့ သူနောကျတဈယောကျရရငျ ငါလညျးနောကျတဈယောကျထားပွမယျဆိုတာမြိုးက ကိုယျ့အတှကျရော နောကျခဈြသူကောငျလေးအတှကျပါမကောငျးပါဘူး။အထူးသဖွငျ့ကိုယျက ရှဲ့ခငျြဇောနဲ့ထားလိုကျပမေဲ့ အဲ့ဒီသူက ကိုယျ့ကိုတကယျခဈြနတေဲ့အခါ သူ့ကိုစိတျဒဏျရာပေးသလိုဖွဈစပေါတယျ။ဒါကွောငျ့ အရငျဆုံး ကိုယျ့စိတျကိုယျတညျငွိမျအောငျထားသငျ့ပါတယျ။
*အရကျကိုအမွဲလိုလိုသောကျနတောမြိုးအရကျသောကျရငျမတေ့ယျဆိုတာ ခဏတာပါပဲ။ပွီးရငျ ပွနျသတိရနဦေးမှာပါ။ဒါကွောငျ့ အရကျသောကျရငျမတေ့ယျဆိုတဲ့အကွောငျးပွခကျြနဲ့နစေ့ဉျလိုလိုသောကျဖွဈနမေယျဆိုရငျ အရကျစှဲတာသာ သငျ့မှာအဖတျတငျသှားပါလိမျ့မယျ။တဈခါတဈရံထကျပိုတဲ့ အရကျသောကျခွငျးတှကေ သငျ့ကို အသညျးကှဲဒဏျရာမပြောကျစပေါဘူး။
*အစားပဲစားနတောမြိုးလူတျောတျောမြားမြားက စိတျညဈရငျအစားနဲ့ဖွဖြေောကျလရှေိ့ပါတယျ။ဒါက ကောငျးပါတယျ။အစားစားလိုကျတော့ စိတျသကျသာရာရသှားတာပေါ့။ဒါပမေဲ့အမွဲလိုလို အစားနဲ့ပါးစပျနဲ့မပွတျပဲဖွဈနမေယျဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့လှပနတေဲ့ခန်ဓာကိုယျလေးကိုဖကျြဆီးမိသလိုဖွဈပွီး ကနျြးမာရေးကိုလညျးထိခိုကျလာစနေိုငျပါတယျ။ဒီလိုအသညျးကှဲနတေဲ့အခြိနျလုပျသငျ့တာက ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျပိုလှအောငျသနဖေို့ပါပဲ
*သူ့အကွောငျးကို အမွဲစုံစမျးနတောမြိုးဘာလုပျမှာလဲ ပွတျစဲပွီးသားလူတဈယောကျအကွောငျးကို အမွဲစုံစမျးနတောဟာ ကိုယျ့စိတျကိုယျ စိတျညဈအောငျလုပျနတောနဲ့အတူတူပါပဲ။သူ့အကွောငျးတှစေုံစမျးမယျ။သူနဲ့တှဲနတေဲ့ကောငျမလေးအကွောငျးစုံစမျးမယျ ပွီးရငျ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျအပွဈတငျမယျ။ဝမျးနညျးမယျ။ငိုမယျ။စိတျညဈစရာတှပွေနျတှေးနမေယျဆိုရငျ ကိုယျ့စိတျကလေး ညဈနှမျးပါတယျနျော။ဒါက စိတျဖိစီးမှုတှပေါဝငျလာစမှောပါ။ဒါကွောငျ့သူ့အကွောငျးအမွဲစုံစမျးနတောမြိုးတှမေလုပျပါနဲ့တော့။
ခဈြသူနဲ့လမျးခှဲပွီးတဲ့အခြိနျကာလအတိုငျးအတာတဈခုထိကတော့ ကွကှေဲဝမျးနညျးနရေဦးမှာပါပဲ။ဒါတှကေို ကိုယျ့အတှကျကောငျးမှနျစတေဲ့အရာတှနေဲ့အစားထိုးပွီးဖွတျသနျးဖို့လိုပါတယျ။အပျေါက အခကျြတှအေတိုငျးတော့ မလုပျမိစနေဲ့နျော
ယူအက်စ်မဂ္ဂဇင်း Vogue မှာ မျက်နှာဖုံးအနုပညာရှင်အဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့ မင်းသမီး Bae Doona